‘world’s first’ 108MP penta-camera smartphone : Mi CC9 Pro | Net Guide
Home Article ‘world’s first’ 108MP penta-camera smartphone : Mi CC9 Pro
တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူ Xiaomi အနနေဲ့ ‘world’s first’ လို့ဆိုရမယျ့ 108MP penta-camera စမတျဖုနျးကို ထုတျပေးလိုကျပါပွီ။ စိတျဝငျစားစရာအကောငျးဆုံးကတော့ဒီစမတျဖုနျးရဲ့ကငျမရာပိုငျးပါ။နောကျကြောဘကျကငျမရာ5လုံး 108MP penta-camera နဲ့ဆိုတာလကျရှိခတျေစကားနဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ ကငျမရာကွီးကဆာလိုကျတာလို့ပွောရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ကငျမရာဒီဇိုငျးဟာ အတျောကွညျ့ကောငျးတဲ့ ဒီဇိုငျးပုံစံမြိုးနဲ့ဖွဈပါတယျ။ Xiaomiအနနေဲ့XiaomiMi CC9 Pro ဖုနျးကို တရုတျဈေးကှကျအတှကျသတျမှတျထားတာဖွဈပွီး ဂလိုဘယျဈေးကှကျအတှကျကိုတော့ မျောဒယျနာမညျMi Note 10 ဆိုပွီး ရောငျးခလြာမှာဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာလုပျဆောငျခကျြပိုငျးအဆငျမွငျ့တငျမှုတှနေဲ့ penta-camera နဲ့ ဖုနျးမှာ ဘယျလိုလုပျဆောငျခကျြကောငျးတှပေါဝငျလာမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတပတျမှာတော့ Mi CC9 Pro/ Mi Note 10 အကွောငျး ရှေးခယျြဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
Mi CC9 Pro စမတျဖုနျးဟာ 108MP camera ဆိုတာနဲ့ သုံးစှဲသူတှကေိုဆှဲဆောငျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာဆငျဆာဟာ Quad Bayer unit ဖွဈပွီး 27MP photos အရညျအသှေးကို outputs ထုတျပေးမှာပါ။ ကငျမရာတှရေဲ့ တညျဆောကျမှုပုံစံဟာ အရှညျလိုကျပုံစံနဲ့ဖွဈပါတယျ။ telephoto cameras2ခုနဲ့ဖွဈပွီး တမြိုးက 2x zoom နဲ့ နောကျတမြိုးကတော့ 5x optical zoom သုံးနိုငျမှာပါ။ နောကျထပျ ကငျမရာတှကေတော့ autofocus ပါဝငျတဲ့ 20MP ultrawide ကငျမရာနဲ့ 2MP macro shooter တှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဇိုငျးပိုငျးအနနေဲ့ အကွမျးမဉျြးကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ 3D curved screen ကိုသုံးထားပါတယျ။ မကျြနှာပွငျကတော့ 6.47″ AMOLED panel ပါ။ ဂိမျးပိုငျးကိုဦးစားပေးကစားနိုငျစဖေို့အတှကျ Snapdragon 730G ပရိုဆကျဆာကိုသုံးပေးထားပါတယျ။
ဒီဖုနျးရဲ့ ပုံစံကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတုိ့အတှကျ ပွီးနှီးပွီးသားပုံစံမြိုးနဲ့ဖွဈပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ရှေ့၊အနောကျ ဖနျသားတှကေိုတော့ ပုံမှနျမဟုတျပဲ curves ပုံစံမြိုးလေးသုံးပေးထားပါတယျ။ အခွားဖုနျးတှမှောဆိုရငျတော့ ခပျပွားပွားပုံစံဒီဇိုငျးမြိုးကိုသာ မွငျရမှာပါ။ အခုအသဈထှကျလာတဲ့ Mi CC9 မှာတော့ ခပျကှေးကှေးပုံစံနဲ့ Gorilla Glass5panels ကိုအရှဘေ့ကျရော၊ အနောကျဘကျမှာရောပါ တပျဆငျပေးထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ပါးလှာတဲ့ အလူမီနီယမျဘောငျ အနားသတျတှကေိုခံစားရမှာပါ။
Xiaomi အမှတျတံဆိပျလေးဟာ နောကျကြောအောကျဘကျနားမှာ ဒေါငျလိုကျလေးခပျနှိပျထားပါတယျ။
ကငျမရာတှမှောတော့ သငျ့အနနေဲ့ 108MP လို့ရေးထားတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ထိပျဘကျမှာတော့ IR blaster နဲ့ အတူအောကျခွဘေကျမှာတော့ loudspeaker ၊ USB-C port ၊ micနဲ့ audio jack အစဉျလိုကျတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ Mi CC9 Pro မှာ နောကျထပျ ဆှဲဆောငျထားတဲ့ အခကျြလေးတှေ ရှိနပေါသေးတယျ … ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ ဖုနျးရဲ့အရောငျတှဲစပျမှု ပုံစံတှဖွေဈပါတယျ။ ကြောဘကျကတော့ အနညျးငယျခြောမှနေ့ကေိုတှရေ့မှာပါ။ 200 ဂရမျကြျောဆိုတာ လေးလံတဲ့ပမာဏလို့ ဆိုနိုငျပမေယျ့ လကျထဲကိုငျတှယျရတာ လှယျကူပွီးသကျတောငျ့သကျသာရှိမှာပါ။ XiaomiကXiaomiMi CC9 Pro က ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး Ultra-Thin Optical In-Display Fingerprint Sensor သုံးထားတဲ့ စမတျဖုနျးဖွဈကွောငျး ဂုဏျယူစှာဆိုသှားပါတယျ။ လကျဗှရောစနဈနရောကကွီးမားတဲ့အပွငျ ရစေိုလကျနဲ့လညျးဖုနျးဖှငျ့နိုငျပါတယျ။
အရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျပိုငျးကနေ စပွောရမယျဆိုရငျ Mi CC9 Pro ရဲ့ screen ဟာ 6.47″ AMOLED panel ဖွဈပွီး curved edges ပုံစံပါ။ သေးငယျတဲ့ waterdrop-shaped notch လေးကိုဖုနျးရဲ့အရှဘေ့ကျမှာထညျ့ထားပွီးသူ့ထဲမှာ 32MP selfie ကငျမရာကိုထညျ့ထားပါတယျ။ အရှဘေ့ကျမှာ တပျဆငျထားတဲ့ ဖုနျးသားကှေးလေးကို Xiaomi ကတော့ 3D display လေးနာမညျပေးထားပါတယျ။ 2340 x 1080px resolution မှာ 19.5:9 aspect ratio သုံးထားပွီး 398ppi; HDR 10 နဲ့ DCI-P3 compliant တို့ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ အောကျဘကျခငျြးကတော့ အတျောသေးတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ TUV Rheinland ထောကျခံခကျြ ရရှိထားတာကွောငျ့ မကျြစိထိခိုကျမှုမဖွဈစပေါဘူး။
ကငျမရာစှမျးဆောငျခကျြတှေ အကွောငျးမပွောခငျသူ့မှာတပျပေးထားတဲ့ ကငျမရာတှအေကွောငျးအကွမျးဖဉျြးကွညျ့ရအောငျ ဟုတျပွီ…. အဓိကကငျမရာကတော့ ဇာတျလိုကျကြျောကွီး 1/1.33″ Quad-Bayer sensor ဖွဈတဲ့ 108MP ပါ။ 0.8µm pixel size, 25mm f/1.7 lens နဲ့ပါ။ Premium edition မှာတော့ 8P lens ကို သုံးထားပါတယျ။ နောကျတခုက 2x zoom ဖွဈတဲ့12MP, f/2.0, 1.4µm pixel size, dual-pixel AF ၊ပွီးတော့ 5x zoom ကငျမရာ 5M, f/2.0, saves 8MP ၊ Ultra wide-angle က 20MP, 13mm f/2.2, 1.12µm pixel size ၊ပွီးတော့Macro ကငျမရာ 2MP, 1/5″, 1.75µm pixel size, f/2.4; AF, 1.5-10cm focusing distance. တှပေဲဖွဈပါတယျ။အရှဘေ့ကျ notch ထဲမှာတော့ 32MP, 0.8µm pixel size, f/2.0 ကိုထညျ့ပေးထားပါတယျ။ပွီးတော့ကငျမရာတှအေတှကျ Dual flashes တပျပေးထားပွီး hard light နဲ့ soft light ကိုခှဲခွားပေးပါလိမျ့မယျ။
XiaomiMi CC9 Pro Premium Edition ရဲ့ကငျမရာစှမျးဆောငျရညျအဆငျ့ သတျမှတျခကျြဟာ DXOMARK Camera tests ပွုလုပျပွီး နောကျ overall score အမှတျပေါငျး 121 မှတျရရှိပွီးထိပျဆုံးမှာ Huawei Mate 30 Pro နဲ့အတူ ရပျတညျလကျြရှိပါတယျ။ Photo score မှာ Mate 30 Pro နောကျ2မှတျလြော့တဲ့ 130 ရရှိထားပွီး၊ Video score မှာတော့ Google Pixel4၊ Samsung Note 10+ 5G ထကျပိုတဲ့အမှတျနဲ့ 102 မှတျနဲ့အမွငျ့ဆုံးရပျတညျနပေါတယျ။ Mi CC Pro ရဲ့ကငျမရာစနဈအလုပျလုပျပုံဟာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးလှနျးလှပါတယျ။ ဆငျဆာအားလုံးပေါငျးအလုပျလုပျပွီး အကောငျးဆုံး 1 ခုအဖွဈ ဖနျတီးပေးတာပါ။ 1.1x ကနေ 1.9x အထိခြဲ့ဖို့အတှကျ အဓိကအာရုံခံကိရိယာကိုသုံးပါတယျ။ 2x ကနေ 3.7x အထိခြဲ့ဖို့ကိုတော့ 12MP 2x telephoto ကငျမရာကိုသုံးပါတယျ။ 3.8x ကနေ 50x အထိခြဲ့ဖို့ကိုတော့5MP 5x telephoto ကိုအသုံးပွုပါတယျ။ 10x hybrid zoom အတှကျ5MP sensor ကိုသုံးပွီး 10x zoom အထကျကိုတော့5MP ကငျမရာရဲ့ digital zoom ကိုအသုံးပွုပါတယျ။
Mi CC9 Pro မှာ ကငျမရာလုပျဆောငျခကျြအသဈ Night Mode (သို့) Night Mode 2.0, ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ Night Mode 2.0 ဟာ Night Mode 1.0 ထကျစာရငျ RAW frames တှကှေနျထရိုးလုပျတဲ့အပိုငျးမှာ ပိုကောငျးလာပါတယျ။ Xiaomi အနနေဲ့ ultrawide angle 20MP ကငျမရာနဲ့အတူ 117 ဒီဂရီ field of view ပါဝငျလာပွီး2စငျတီမီတာကနေ 10 စငျတီမီတာ macro lens အသေးစားကငျမရာလေးလညျး ပါဝငျလာပါတယျ။ အဲဒီကငျမရာတှကေ 1.5 စငျတီမီတာအကှာက အနီးကပျပုံအသေးစိတျကို ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။5လုံးမွောကျကငျမရာကတော့ portrait အတှကျဖွဈပွီး 2MP depth sensor မဟုတျဘဲ 2x zoom နဲ့အတူ 12MP telephoto ရိုကျကူးနိုငျအောငျ ပွုလုပျပေးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့အကောငျးဆုံးရှုထောငျ့ကနေ 50 မီလီမီတာ focal အကှာအဝေးကနခြေိနျရှယျနိုငျပါတယျ။ Phone 11 Max Pro ဟာ DxOMark မှာ ရမှတျ 117 သာရရှိခဲ့ပွီး တတိယနရောမှာဘဲရပျတညျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ iPhone 11 Pro Max ဟာ Huawei Mate 30 Pro နဲ့ ပူပူနှေးနှေးကွညောထားတဲ့ XiaomiMi CC9 Pro Premium Edition/XiaomiMi Note 10 Pro ကို မကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဖုနျးမှာ Snapdragon 730G ပရိုဆကျဆာကို သုံးထားပါတယျ။ 1080p resolution ဟာ ဂိမျးကစားတဲ့အခြိနျတှမှော ကွီးမားပွညျ့စုံတဲ့ framerates နဲ့ဆော့နိုငျမှာပါ။ XiaomiMi CC9 Pro ဖုနျးသဈမှာ Android9အခွပွေုနောကျဆုံးပျေါ MIUI 11 ကို တပါတညျးထညျ့ပေးထားပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာစမတျဖုနျးတှထှေကျလာရငျ Android 10 ကိုတပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးလာမယျလို့ ထငျကွပမေယျ့ထုတျလုပျသူတှဟော Android 10 ပျေါ စိုးရိပျစိတျရှိနကွေတဲ့ပုံပါ။ Xiaomi ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ under-display fingerprint reader ဟာ ယခငျမြိုးဆကျမြားထကျ 88 ရာခိုငျနှုနျးပိုမိုပါးလှာပွီး ဘကျထရီလိုအရာမြိုးတှအေတှကျ နရောလှတျတှဖေနျတီးပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ recognition area ဟာ 10% ပိုကွီးလာပွီးသုံးရတာ ပိုတိကပြွီးပိုမွနျဆနျလာပါတယျ။
XiaomiMi CC9 Pro အတှငျးပိုငျးကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျတော့ 8nm Snapdragon 730G chipset ပါဝါစှမျးအားကို သုံးထားပါတယျ။ဒီပရိုဆကျဆာဟာ flagship processor လို့မသတျမှတျနိုငျပမေယျ့လကျရှိအခြိနျမှာတော့ Qualcomm ရဲ့ midrange chipset ထဲမှာထိပျတနျးအဆငျ့ရှိပါတယျ။G ဆိုတာGaming SoC ဖွဈတာကွောငျ့ Gaming Features တှမှောစှမျးဆောငျရညျမွငျ့စတေဲ့အပွငျ AI Function, Image Capture တှနေဲအတူစမတျဖုနျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးကို အားသာအောငျဆောငျရှကျပေးပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံအတှကျ ထုတျပေးမယျ့ Mi CC9 Pro ကို 6/128GB, 8/128GB နဲ့ 8/256GB ဆိုပွီးဗားရှငျ3းမြိုးထုတျထားပါတယျ။ GPU အမွနျနှုနျးမှာလညျး vanilla SD730 ထကျယှဉျလိုကျရငျ 15% နှုနျး ဂရပျဖဈပိုငျးကို တိုးမွငျ့ထားပါတယျ။ Snapdragon 730G: octa-core CPU ရဲ့ပေါငျးစပျမှုဟာ 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) ဖွဈပွီး Adreno 618 GPU သုံးထားပါတယျ။ Premium edition ကတော့ 128/256GB storage တှပေါ။
OpenGL နဲ့ Vulkanမှာ 2,384 နဲ့ 2,240 အသီးသီးရရှိထားပါတယျ။ Snapdragon 730 ပါဝါစှမျးအားသုံးXiaomiMi 9T ကတော့ တူညီတဲ့စမျးသပျခကျြတှမှော 2,197 နဲ့ 2,064 အသီးသီးရရှိထားပါတယျ။ AnTuTuစမျးသပျခကျြမှာတော့ CC9 Pro က 259,773 ရထားပွီး Mi 9T ကတော့ 211,963 score ရထားပါတယျ။ Geekbench စမျးသပျခကျြ ရလာဒျတှကေို ထပျကွညျ့ လိုကျမယျဆိုရငျ single-coreမှာ 2,535 နဲ့ multi-core မှာ 6,821 ရထားပါတယျ။ Mi 9T ကတော့ single-core မှာ 2,550 နဲ့ multi-core မှာ 6,948 ရတာကွောငျ့ ဒီရလာဒျမှာတော့သိပျကှာဟခွငျးမရှိပါဘူး။
XiaomiMi CC9 Pro မှာ ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုအနနေဲ့ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth v5.00, NFC, USB Type-C, FM radioWi-Fi Direct တို့ ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ ဆငျးကတျ2မြိုးလုံးဟာ 4G ခြိတျဆကျနိုငျမှာပါ။ ဆငျဆာပိုငျးမှာတော့ accelerometer, ambient light sensor, compass/ magnetometer, gyroscope, proximity sensor, fingerprint sensor တို့ပါဝငျပွီးMi CC9 Pro Premium Edition ကတော့ face unlock ထောကျပံ့ပါတယျ။ Battery ပိုငျးမှာ တော့ 5260mAh Li-Ion Battery ကို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုထားတာဖွဈပွီး 30W fast charging ဖွဈပွီး 0-100% ကဖို့အတှကျ 65min မိနဈမှာကွာမှာပါ။
Mi CC9 Pro စမတျဖုနျးနဲ့အတူ Mi အမှတျတံဆိပျနဲ့ ပထမဆုံးစမတျနာရီ Mi Watch ကို မိတျဆကျလိုကျပါတယျ။ Mi Watch မှာ မကျြနှာပွငျ 1.78 လကျမ AMOLED Screen သုံးထားပွီး 44 မီလီမီတာဒိုငျခှကျမှာ Always-on Capabilities သုံးထားပါတယျ။ ကြောဘကျမှာ စီရာမဈသုံးထားပွီး ခလုတျတဈခုတညျးပါဝငျပါတယျ။ သော့တံကိုညာခွမျးမှာ ထညျ့သှငျးထားပွီး Interface အတှကျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဘယျဖကျမှာ စပီကာတဈလုံးနဲ့မိုကျခရိုဖုနျးတို့ပါဝငျပါတယျ။ Mi Watch မှာ Google ရဲ့ Wear OS အခွခေံထားတဲ့ MIUI Wear OS ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ နာရီအတှကျထုတျလုပျထားတဲ့ MIUI မှာ app အခု 40 ကြျောနဲ့ third-party developer တှအေတှကျသီးခွား app store ပါဝငျလာပါတယျ။ သူ့မှာရကေူးတာနဲ့ ကိုယျလကျကွံ့ခိုငျရေးကို ခွရောခံတဲ့ feature မြားစှာပါဝငျလာပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးအမြိုးမြိုးလုပျတာအပျေါအခွခေံပွီး နှလုံးခုနျနှုနျးအခကျြအလကျ တှကေို အသေးစိတျခှဲခွမျးစိတျဖွာပေးတဲ့ Firstbeat ရဲ့စှမျးဆောငျရညျလလေ့ာခကျြနဲ့လညျး တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
Mi Watch မှာ Snapdragon Wear 3100 4G chipset နဲ့အတူ RAM 1GB အပွငျ storage 8GB ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ Mi Watch မှာ 570mAh ဘကျထရီကို အသုံးပွုထားပွီး ဘကျထရီသကျတမျးကတော့ 4G ကိုဖှငျ့လိုကျရငျ 36 နာရီဆကျတိုကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Bluetooth, NFC နဲ့ eSIM ထောကျပံ့မှုတို့ပါဝငျလာပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံမှာပဲသီးသနျ့ရောငျးခမြှာ ဖွဈပွီးနိုငျငံတကာကို ဘယျအခြိနျမှာ ဖွနျ့ခြိမလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူး။ နိုဝငျဘာ 11 ရကျမှာ တရုတျဈေးကှကျအတှငျး 185 ဒျေါလာနဲ့ရောငျးခပြါမယျ။ Premium Edition Mi Watch ကတော့ sapphire crystal မကျြနှာပွငျနဲ့ဖွဈပွီး စတီးကိုယျထညျနဲ့ကွိုးအသုံးပွုထားပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကတော့ ဒျေါလာ 285 သတျမှတျထားပါတယျ။
တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Xiaomi အနေနဲ့ ‘world’s first’ လို့ဆိုရမယ့် 108MP penta-camera စမတ်ဖုန်းကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာပိုင်းပါ။နောက်ကျောဘက်ကင်မရာ5လုံး 108MP penta-camera နဲ့ဆိုတာလက်ရှိခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ကင်မရာကြီးကဆာလိုက်တာလို့ပြောရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ကင်မရာဒီဇိုင်းဟာ အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomiအနေနဲ့XiaomiMi CC9 Pro ဖုန်းကို တရုတ်ဈေးကွက်အတွက်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဂလိုဘယ်ဈေးကွက်အတွက်ကိုတော့ မော်ဒယ်နာမည်Mi Note 10 ဆိုပြီး ရောင်းချလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းအဆင်မြင့်တင်မှုတွေနဲ့ penta-camera နဲ့ ဖုန်းမှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတပတ်မှာတော့ Mi CC9 Pro/ Mi Note 10 အကြောင်း ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
Mi CC9 Pro စမတ်ဖုန်းဟာ 108MP camera ဆိုတာနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာဆင်ဆာဟာ Quad Bayer unit ဖြစ်ပြီး 27MP photos အရည်အသွေးကို outputs ထုတ်ပေးမှာပါ။ ကင်မရာတွေရဲ့ တည်ဆောက်မှုပုံစံဟာ အရှည်လိုက်ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ telephoto cameras2ခုနဲ့ဖြစ်ပြီး တမျိုးက 2x zoom နဲ့ နောက်တမျိုးကတော့ 5x optical zoom သုံးနိုင်မှာပါ။ နောက်ထပ် ကင်မရာတွေကတော့ autofocus ပါဝင်တဲ့ 20MP ultrawide ကင်မရာနဲ့ 2MP macro shooter တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ အကြမ်းမျဉ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 3D curved screen ကိုသုံးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကတော့ 6.47″ AMOLED panel ပါ။ ဂိမ်းပိုင်းကိုဦးစားပေးကစားနိုင်စေဖို့အတွက် Snapdragon 730G ပရိုဆက်ဆာကိုသုံးပေးထားပါတယ်။
ဒီဖုန်းရဲ့ ပုံစံကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တုိ့အတွက် ပြီးနှီးပြီးသားပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရှေ့၊အနောက် ဖန်သားတွေကိုတော့ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ curves ပုံစံမျိုးလေးသုံးပေးထားပါတယ်။ အခြားဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ခပ်ပြားပြားပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးကိုသာ မြင်ရမှာပါ။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Mi CC9 မှာတော့ ခပ်ကွေးကွေးပုံစံနဲ့ Gorilla Glass5panels ကိုအရှေ့ဘက်ရော၊ အနောက်ဘက်မှာရောပါ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါးလွှာတဲ့ အလူမီနီယမ်ဘောင် အနားသတ်တွေကိုခံစားရမှာပါ။
Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်လေးဟာ နောက်ကျောအောက်ဘက်နားမှာ ဒေါင်လိုက်လေးခပ်နှိပ်ထားပါတယ်။
ကင်မရာတွေမှာတော့ သင့်အနေနဲ့ 108MP လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်ဘက်မှာတော့ IR blaster နဲ့ အတူအောက်ခြေဘက်မှာတော့ loudspeaker ၊ USB-C port ၊ micနဲ့ audio jack အစဉ်လိုက်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Mi CC9 Pro မှာ နောက်ထပ် ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ် … ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ဖုန်းရဲ့အရောင်တွဲစပ်မှု ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကတော့ အနည်းငယ်ချောမွေ့နေကိုတွေ့ရမှာပါ။ 200 ဂရမ်ကျော်ဆိုတာ လေးလံတဲ့ပမာဏလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် လက်ထဲကိုင်တွယ်ရတာ လွယ်ကူပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိမှာပါ။ XiaomiကXiaomiMi CC9 Pro က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Ultra-Thin Optical In-Display Fingerprint Sensor သုံးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာဆိုသွားပါတယ်။ လက်ဗွေရာစနစ်နေရာကကြီးမားတဲ့အပြင် ရေစိုလက်နဲ့လည်းဖုန်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ပိုင်းကနေ စပြောရမယ်ဆိုရင် Mi CC9 Pro ရဲ့ screen ဟာ 6.47″ AMOLED panel ဖြစ်ပြီး curved edges ပုံစံပါ။ သေးငယ်တဲ့ waterdrop-shaped notch လေးကိုဖုန်းရဲ့အရှေ့ဘက်မှာထည့်ထားပြီးသူ့ထဲမှာ 32MP selfie ကင်မရာကိုထည့်ထားပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဖုန်းသားကွေးလေးကို Xiaomi ကတော့ 3D display လေးနာမည်ပေးထားပါတယ်။ 2340 x 1080px resolution မှာ 19.5:9 aspect ratio သုံးထားပြီး 398ppi; HDR 10 နဲ့ DCI-P3 compliant တို့ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ အောက်ဘက်ချင်းကတော့ အတော်သေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ TUV Rheinland ထောက်ခံချက် ရရှိထားတာကြောင့် မျက်စိထိခိုက်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။
ကင်မရာစွမ်းဆောင်ချက်တွေ အကြောင်းမပြောခင်သူ့မှာတပ်ပေးထားတဲ့ ကင်မရာတွေအကြောင်းအကြမ်းဖျဉ်းကြည့်ရအောင် ဟုတ်ပြီ…. အဓိကကင်မရာကတော့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး 1/1.33″ Quad-Bayer sensor ဖြစ်တဲ့ 108MP ပါ။ 0.8µm pixel size, 25mm f/1.7 lens နဲ့ပါ။ Premium edition မှာတော့ 8P lens ကို သုံးထားပါတယ်။ နောက်တခုက 2x zoom ဖြစ်တဲ့12MP, f/2.0, 1.4µm pixel size, dual-pixel AF ၊ပြီးတော့ 5x zoom ကင်မရာ 5M, f/2.0, saves 8MP ၊ Ultra wide-angle က 20MP, 13mm f/2.2, 1.12µm pixel size ၊ပြီးတော့Macro ကင်မရာ 2MP, 1/5″, 1.75µm pixel size, f/2.4; AF, 1.5-10cm focusing distance. တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဘက် notch ထဲမှာတော့ 32MP, 0.8µm pixel size, f/2.0 ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ကင်မရာတွေအတွက် Dual flashes တပ်ပေးထားပြီး hard light နဲ့ soft light ကိုခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်။
XiaomiMi CC9 Pro Premium Edition ရဲ့ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ဟာ DXOMARK Camera tests ပြုလုပ်ပြီး နောက် overall score အမှတ်ပေါင်း 121 မှတ်ရရှိပြီးထိပ်ဆုံးမှာ Huawei Mate 30 Pro နဲ့အတူ ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ Photo score မှာ Mate 30 Pro နောက်2မှတ်လျော့တဲ့ 130 ရရှိထားပြီး၊ Video score မှာတော့ Google Pixel4၊ Samsung Note 10+ 5G ထက်ပိုတဲ့အမှတ်နဲ့ 102 မှတ်နဲ့အမြင့်ဆုံးရပ်တည်နေပါတယ်။ Mi CC Pro ရဲ့ကင်မရာစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ဆင်ဆာအားလုံးပေါင်းအလုပ်လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး 1 ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးတာပါ။ 1.1x ကနေ 1.9x အထိချဲ့ဖို့အတွက် အဓိကအာရုံခံကိရိယာကိုသုံးပါတယ်။ 2x ကနေ 3.7x အထိချဲ့ဖို့ကိုတော့ 12MP 2x telephoto ကင်မရာကိုသုံးပါတယ်။ 3.8x ကနေ 50x အထိချဲ့ဖို့ကိုတော့5MP 5x telephoto ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ 10x hybrid zoom အတွက်5MP sensor ကိုသုံးပြီး 10x zoom အထက်ကိုတော့5MP ကင်မရာရဲ့ digital zoom ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
Mi CC9 Pro မှာ ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်အသစ် Night Mode (သို့) Night Mode 2.0, ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Night Mode 2.0 ဟာ Night Mode 1.0 ထက်စာရင် RAW frames တွေကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ ultrawide angle 20MP ကင်မရာနဲ့အတူ 117 ဒီဂရီ field of view ပါဝင်လာပြီး2စင်တီမီတာကနေ 10 စင်တီမီတာ macro lens အသေးစားကင်မရာလေးလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီကင်မရာတွေက 1.5 စင်တီမီတာအကွာက အနီးကပ်ပုံအသေးစိတ်ကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။5လုံးမြောက်ကင်မရာကတော့ portrait အတွက်ဖြစ်ပြီး 2MP depth sensor မဟုတ်ဘဲ 2x zoom နဲ့အတူ 12MP telephoto ရိုက်ကူးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးရှုထောင့်ကနေ 50 မီလီမီတာ focal အကွာအဝေးကနေချိန်ရွယ်နိုင်ပါတယ်။ Phone 11 Max Pro ဟာ DxOMark မှာ ရမှတ် 117 သာရရှိခဲ့ပြီး တတိယနေရာမှာဘဲရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ iPhone 11 Pro Max ဟာ Huawei Mate 30 Pro နဲ့ ပူပူနွေးနွေးကြေညာထားတဲ့ XiaomiMi CC9 Pro Premium Edition/XiaomiMi Note 10 Pro ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းမှာ Snapdragon 730G ပရိုဆက်ဆာကို သုံးထားပါတယ်။ 1080p resolution ဟာ ဂိမ်းကစားတဲ့အချိန်တွေမှာ ကြီးမားပြည့်စုံတဲ့ framerates နဲ့ဆော့နိုင်မှာပါ။ XiaomiMi CC9 Pro ဖုန်းသစ်မှာ Android9အခြေပြုနောက်ဆုံးပေါ် MIUI 11 ကို တပါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာစမတ်ဖုန်းတွေထွက်လာရင် Android 10 ကိုတပါတည်း ထည့်သွင်းပေးလာမယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ Android 10 ပေါ် စိုးရိပ်စိတ်ရှိနေကြတဲ့ပုံပါ။ Xiaomi ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ under-display fingerprint reader ဟာ ယခင်မျိုးဆက်များထက် 88 ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုပါးလွှာပြီး ဘက်ထရီလိုအရာမျိုးတွေအတွက် နေရာလွတ်တွေဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ recognition area ဟာ 10% ပိုကြီးလာပြီးသုံးရတာ ပိုတိကျပြီးပိုမြန်ဆန်လာပါတယ်။
XiaomiMi CC9 Pro အတွင်းပိုင်းကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 8nm Snapdragon 730G chipset ပါဝါစွမ်းအားကို သုံးထားပါတယ်။ဒီပရိုဆက်ဆာဟာ flagship processor လို့မသတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Qualcomm ရဲ့ midrange chipset ထဲမှာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိပါတယ်။G ဆိုတာGaming SoC ဖြစ်တာကြောင့် Gaming Features တွေမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စေတဲ့အပြင် AI Function, Image Capture တွေနဲအတူစမတ်ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို အားသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ထုတ်ပေးမယ့် Mi CC9 Pro ကို 6/128GB, 8/128GB နဲ့ 8/256GB ဆိုပြီးဗားရှင်3းမျိုးထုတ်ထားပါတယ်။ GPU အမြန်နှုန်းမှာလည်း vanilla SD730 ထက်ယှဉ်လိုက်ရင် 15% နှုန်း ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းကို တိုးမြင့်ထားပါတယ်။ Snapdragon 730G: octa-core CPU ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုဟာ 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) ဖြစ်ပြီး Adreno 618 GPU သုံးထားပါတယ်။ Premium edition ကတော့ 128/256GB storage တွေပါ။
OpenGL နဲ့ Vulkanမှာ 2,384 နဲ့ 2,240 အသီးသီးရရှိထားပါတယ်။ Snapdragon 730 ပါဝါစွမ်းအားသုံးXiaomiMi 9T ကတော့ တူညီတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေမှာ 2,197 နဲ့ 2,064 အသီးသီးရရှိထားပါတယ်။ AnTuTuစမ်းသပ်ချက်မှာတော့ CC9 Pro က 259,773 ရထားပြီး Mi 9T ကတော့ 211,963 score ရထားပါတယ်။ Geekbench စမ်းသပ်ချက် ရလာဒ်တွေကို ထပ်ကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် single-coreမှာ 2,535 နဲ့ multi-core မှာ 6,821 ရထားပါတယ်။ Mi 9T ကတော့ single-core မှာ 2,550 နဲ့ multi-core မှာ 6,948 ရတာကြောင့် ဒီရလာဒ်မှာတော့သိပ်ကွာဟခြင်းမရှိပါဘူး။
XiaomiMi CC9 Pro မှာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအနေနဲ့ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth v5.00, NFC, USB Type-C, FM radioWi-Fi Direct တို့ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဆင်းကတ်2မျိုးလုံးဟာ 4G ချိတ်ဆက်နိုင်မှာပါ။ ဆင်ဆာပိုင်းမှာတော့ accelerometer, ambient light sensor, compass/ magnetometer, gyroscope, proximity sensor, fingerprint sensor တို့ပါဝင်ပြီးMi CC9 Pro Premium Edition ကတော့ face unlock ထောက်ပံ့ပါတယ်။ Battery ပိုင်းမှာ တော့ 5260mAh Li-Ion Battery ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး 30W fast charging ဖြစ်ပြီး 0-100% ကဖို့အတွက် 65min မိနစ်မှာကြာမှာပါ။
Mi CC9 Pro စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ Mi အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ပထမဆုံးစမတ်နာရီ Mi Watch ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Mi Watch မှာ မျက်နှာပြင် 1.78 လက်မ AMOLED Screen သုံးထားပြီး 44 မီလီမီတာဒိုင်ခွက်မှာ Always-on Capabilities သုံးထားပါတယ်။ ကျောဘက်မှာ စီရာမစ်သုံးထားပြီး ခလုတ်တစ်ခုတည်းပါဝင်ပါတယ်။ သော့တံကိုညာခြမ်းမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး Interface အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဖက်မှာ စပီကာတစ်လုံးနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ Mi Watch မှာ Google ရဲ့ Wear OS အခြေခံထားတဲ့ MIUI Wear OS ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ နာရီအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ MIUI မှာ app အခု 40 ကျော်နဲ့ third-party developer တွေအတွက်သီးခြား app store ပါဝင်လာပါတယ်။ သူ့မှာရေကူးတာနဲ့ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးကို ခြေရာခံတဲ့ feature များစွာပါဝင်လာပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးလုပ်တာအပေါ်အခြေခံပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းအချက်အလက် တွေကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးတဲ့ Firstbeat ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လေ့လာချက်နဲ့လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Mi Watch မှာ Snapdragon Wear 3100 4G chipset နဲ့အတူ RAM 1GB အပြင် storage 8GB ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Mi Watch မှာ 570mAh ဘက်ထရီကို အသုံးပြုထားပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကတော့ 4G ကိုဖွင့်လိုက်ရင် 36 နာရီဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Bluetooth, NFC နဲ့ eSIM ထောက်ပံ့မှုတို့ပါဝင်လာပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာပဲသီးသန့်ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖြန့်ချိမလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူး။ နိုဝင်ဘာ 11 ရက်မှာ တရုတ်ဈေးကွက်အတွင်း 185 ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းချပါမယ်။ Premium Edition Mi Watch ကတော့ sapphire crystal မျက်နှာပြင်နဲ့ဖြစ်ပြီး စတီးကိုယ်ထည်နဲ့ကြိုးအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ 285 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Previous articleHonor 7s VS Honor9Lite
Next articleMotorola Razr လို ခေါကျစမတျဖုနျး ထုတျလုပျရောငျးခလြာမယျ့ Xiaomi